I-China SOC kunye nomqheba zibandakanya i-36V 40Ah LiFePO4 ibhetri yepakethi yombane wesithuthuthu / isithuthuthu / ibhayisekile yomvelisi kunye noMthengisi | LIAO
1. Ngesiphatho kunye ne-SOC 36V 40Ah LiFePO4 ipakethe ye-batteyr yemoto enesidima.
2. Ukukhutshwa okuphezulu ngoku: i-max yangoku yokukhupha inokuba yi-80A eyi-2C.
Umzekelo No. I-CGS-F3640N
Amandla ombane 36V
Amandla okuzimela 40Ah
Ubukhulu. ukuqhubeka kwentlawulo ngoku 80A
Ubukhulu. Ukukhutshwa ngoku okuqhubekayo 80A
Ubomi bomjikelo Amaxesha angama-2000
Ubushushu bokugcina -20 ° C ~ 45 ° C
Ubunzima Malunga ne-20kg
Ukusetyenziswa Ekhethekileyo imoto Bumper, isicelo unikezelo lwamandla, ect.
3. Isinyithi sesinyithi kunye ne-SOC nesiphatho.
4. Ubomi bomjikelo omde: Rechargeable lithium iron phosphate battery cell, has more than 2000 cycles which is 7 times of lead acid battery.
5. Ubunzima bokukhanya: Kujikeleze kuphela 1/3 ubunzima bebhetri yelothe.
6. Ukusebenza ngokugqwesileyo kwezokhuseleko: i-LiFePO4 lolona hlobo lwebhetri ye-lithium ekhuselekileyo eyamkelweyo kolu shishino.
7. Amandla aluhlaza: Akukho nto itsalelayo kwindalo esingqongileyo.
Imoto ebetha ibhetri ayifuni kuqwalaselo olukhethekileyo lwesiza. Ingasetyenziselwa ukuba ihlawuliswe ngokupheleleyo. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Izinto ngokubanzi zezi: i-chassis yenziwe ngentsimbi, kwaye iqokobhe langaphandle lenziwe ngeglasi yefayibha eqinisiweyo.
Ibhetri yemoto e-bumper: Yenziwe ngokhuseleko lweglasi yefayibha eqinisiweyo yeemveliso zeplastiki ngaxeshanye, iinxalenye zentsimbi zitshizwa ngombane kwaye zibhakwe, zixhotyiswe ngeaudiyo ephezulu, ukubeka, ukukhanyisa, imisebenzi yexesha, njl., Zenziwe zezilwanyana zokulinganisa, ezimibalabala, ezingezizo -ukufiphala, okusingqongileyo, ukunganyangeki ukubola, Inempawu zokuzinza okuhle, inkangeleko entle, isimbo senoveli, ukusebenza kakuhle kokhuseleko, kunye noluhlu olubanzi lweendawo. Isixhobo sokuzonwabisa esithandwayo kwintengiso kunye nabantwana.
Ngapha koko, kuhlalutyo lokusetyenziswa kokusebenza, ukhuseleko, ukunceda, isantya kunye nezinye izinto zeemoto ezi-bumper, iimoto ezi-bumper zingahlulwa zibe: Tiandi.com iimoto ezihamba nzima kunye neemoto zebhetri. Kwezi ndidi zimbini, ewe, ziyinxalenye yokusetyenziswa kunye nokusetyenziswa kweemoto zebhetri. Yeyona inkulu.
Nangona imoto yebhetri iyimveliso ephezulu kwimveliso yeemoto ezikumgangatho ophezulu, kudidi olufanayo lweemoto ezibhetri, iimoto ezinamanqanaba ahlukeneyo akumgangatho ohlukileyo zihlelwa ngokokusebenza kweemoto.
Egqithileyo Ukusebenza okuphezulu komgangatho olungileyo 24V 60Ah LiFePO4 Ipakethe yebhetri ye-AGV
Okulandelayo: Ikharavani eshukumayo ibhetri LAXpower-1230 12V 30Ah LiFePO4 ibhetri ephethe itshaja eyakhelweyo kunye ne-SOC